Xasan Sheekh Maxamud | Voice Of Somalia
Tag Archives: Xasan Sheekh Maxamud
Posted on November 16, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Xildhibaanada taabacsan Cabdi Wali Sheekh ayaa shalay markii 2-aad ku guuleystay in ay dib udhigaan soo bandhigista mooshinka ka dhanka ah xukuumadda ee gacanta guddoomiyaha baarlamaanka kujira.
Xasan Gurguurte oo xalay shirar kala gooni gooni ah laqaatay saraakiisha ciidanka Nabad sugidda ayaa kala hadlay sida ugu macquulsan ee lagu joojin karo fowdada ay ku dhaqaaqayaan xildhibaanada Cabdi Wali Sheekh taabacsan.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in Xasan uu damacsanyahay adeegsiga ciidanka Uganda ee qeybta ka ah shisheeyaha AMISOM kuwaasi oo si hoose lacag uga qaatay xafiiskiisa.
Taliyaha ciidanka Uganda ee Muqdisho ku sugan ayaa xalka gaarista mashaakilaadka ka taagan fadhiyada baarlamaanka kala hadlay N.Kay oo ah xaakimka gumeystaha uqaabilsan Soomaaliya waxayna ubadantahay in AMISOM loo diido faragelinta khilaafka madaxda DF-ka ka dhaxtaagan.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in guddoomiyaha baarlamaanka uu lasafanyahay dhanka R/wasaaraha islamarkaana uu ka meer meerayo in kulanka baarlamaanka sidii larabay uqabsoomo.
Waqtiga ayaa guraya Xasan Gurguurte oo ku taamayay in inta aan lagaarin maalinta arbacada uu soo afjaro R/wasaaranimada Cabdi Wali sheikh si shirka Denmark ka dhici doono uu uga qeyb galo.
SAWIRO:-Riwaayadii Xasan Sheekh iyo Muungaab“Nabad Ku Afura”
Posted on July 3, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Dacaayadaha ugu badan ee loo sameeyay Xasan Sheekh markii uu qabtay talada soomaliya iyo kadiba waxaa ka mid ahaa in uu yahay qof aqoonyahan ah oo aan gacmahiisa dhiig lahayn, soomaliyana badbaadin doona, laakiin nasiib daro soomalida waxay ka dheeftay waa in intii kala qeybsaneyd uu sii kala qeybiyay, dagaalo iyo colaado horlehna ka huriyay gobolo badan oo somaliya.
Si uu uga qariyo bulshada inteeda qabyaalada ku taageereysana uu u sii madadaaliyo ayaa waxaad arkeysaa in uu waqtigiisa ku dhiminayo xaflado iyo munaasabado uu ka qeyb galo, isagoo adeegsanaya hadalo macmacaaan oo qofka aan u fiirsan ugu muuqanaya in uu yahay qof daacad ah.
Xasan Sheekh oo madax u yahay koox NGO-ley ah, oo dantooda tahay in ay lacago badan helaan, ayaa marba mashruuc u muuqda in ay lacago badan ku raadinayaan ku mashquula, ilaa haddana 5 shir oo la sheegay in lagu diyaarinayo qorshaha ka dambeeya 2016 ayey qabteen waxna lagama hirgelin talooyinkii ka soo baxay, waxaana ka mid ah shirkii siyaasadeed ee ay ugu magac dareen vision 16, kii garsoorka, midka amaanka IWM.
Arinta ugu daran ayaa ahayd in shirka loogu hadlayo amaanka laba mar la qabtay, mar walbana ay lahaayeen kooxda Xasan Sheekh: dowladda waxa ay dooneysaa in ay qeybaha kala duwan ee bulshada ka hesho talooyin iyo aragtiyo ku saabsan qorshooyinka ay dalka ku ansixineyso, haddaba waxaa is weydiin leh: aaway talooyinkii ay soomalida ku darsatay shirkii hore, maxaase loo hirgelin waayey waxii ka soo baxay?.
Iyadoo lagu ogaa Xasan Ruwaayado tiro badan oo aan la qoon halka ay u socdaan, soomalidana uu ku madadaalinayo, ayaa hadda waxaa ku soo biiray gudoomiyaha gobolka Banaadir Mungaab, si la mid ah Xasan Sheekh ayaa Mungaab waxa uu suuqa ku soo galay in uu yahay aqoonyahan, ciidan yahan ad adag oo wax ka qabanaya amaanka Muqdisho dhinaca dowlado ka howlgasho waa jidka dheer ee maka Al Mukarama,taasoobeen noqotay markii booliska’Maleeshiyaadka Dowlada’ maalin cad lagu gumaaday.
Mungaab, ilaa maantadan oo ay bilooyin ka soo wareegeen markii la magacaabay ma jirto wax uu qabtay oo aan ka ahayn in uu booqasho ku tagay xeebta liido iyo dalka Turkey, iskaba daa in uu wax wanaag ah ku soo kordhiyo amaanka Muqdisho ee waxa uuba awood u la’yahay in uu sugo amaankiisa iyo kan xafiiskiisa.
Markii uu xilka qabtay waxa uu ku faanay in uu degayo Degmada Heliwaa oo xafiiska gobolka Banaadir u rarayo, Shabaabna ka ciribtirayo Muqdisho,laakiin tan iyo markaas Al-shabaab waxa ay soo weerareen xarunta gobolka marar badan, oo ay ugu dambeysay mudo habeen laga joogo oo ay ku sigteen in ay gudaha u galaan xaruntiisa, qoryo badana ay ka qaateen maleshiyadii ilaalada u ahayd.
Xasan Sheekh iyo Kooxdiisa oo uu Mungaab ka mid yahay marna ma awoodaan inay wax ka qabtaan amaanka Muqdisho, mana awodaan sida kuwii ka horeeyay inay dhisaan ciidamo booliis iyo Military oo xirfad leh amaanka caasimadana sugi kara waayo waxa ay qeyb ka yihiin qoshe ay wataan koox qabiil ah oo dooneysa ama u aragta in hadii dalka hagaago, oo kala dambeyn iyo nabad ku soo noqoto in waayayaan dhamaan danaha dhaqaale iyo qabiil ee ay hadda heystaan.
Waxaad maqleysaa xeebta Liido ayey booqasho ku tageen, socod ayey ku soo mareen wadooyinka muhiimka ah ee Muqdisho, Hoteel hebel ayey ku soo caweeyeen laakiin marka ay ka soo baxaan iyo ka horba waxaa magaalada gudaheeda maalin cad dilal qorsheysan, qaraxyo iyo weeraro ka fuliya Al-shaab.
Sidaas oo ay tahay umadda ayey ku madadaalinayaan ciidamo aad u tababaran oo loogu magac daray nabad ku afur ayaan magaalada dhignay, mudo kadibna waxaad maqli doontaan iyagoo leh ciidamo loogu magac daray nabad ku ciida ayaan magaalad dhignay, shacabkii Muqdishana hadda waxay ku afurayaan dhiig, dilal iyo weeraro, berina waxay ku ciidi doonaan ilaah un ayaa garanaya.
DHAGEYSO:-Xasan Sheekh oo Qiray inow Khilaaf ka Dhex Jiro Hogaanka Dowladda.
Xasan Sheekh waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay khilaaf la sheegay inuu ka dhexjira hogaanka dowladda Federaalka gaar ahaan Xasan Sheekh iyo Cabdiweli Sheekh.
Xasan Sheekh waxa uu qiray inow jiro kala duwaanasha iyo kala aragti taasi oo uu xusay iney tahay mid ka jirtay dowladihii isaga ka horeeyay islamarkaana ka dhexjiri doonta kuwa isaga ka dambeeya ee ku fadhiista kursiga Villa Soomaaliya ee Raahja shisheeye lagu ilaalsho.
Mudooyinkii dambe waxaa soo baxayay khilaaf ka dhextaagan Xasan Sheekh iyo Cabdiweli Sheekh kaasi oo ku aadan isku shaandheyn uu R/wasaaraha doonaya inuu ku sameeya golahiisa wasiirada.
Cabdi Wali waxa uu qorsheynayaa inuusan dib u soo magacaabin Guuleed iyo Faarax oo kasoo haray xukuumadii Saacid Shirdoon taasi oo uu si aad ah kaga soo horjeestay Xasan Sheekh iyo Dammul jadiid.
HOOS KA DHGEYSO.